Home Wararka Dibada Salmaan khan ayaa lagu xukumay shan sano oo xarig
Salmaan khan ayaa lagu xukumay shan sano oo xarig
Salmaan khan ayaa lagu xukumay shan sano oo xarig ah oo ay ku xukuntay maxkamad ku taalla magaalada Mumbai arrin la xiriirta shil baabuur laakiin kiiska ayaa markii damb looga cafiyey mxkamadda Sare. ciidamada ammaanka ayaa la soo dhoobay halka uu degagan yahay aktarkaa caanka ah ee Bollywoodka ka dib markii ay soo gaareen hanjabaaddo dil ah sida ay wararku sheegayaan , Salman aabihii , oo ah sheeko tabiye Saleem khan ayaa socod u soo baxay sida jadwl maalmeedkiisu ahaa subax Axad ah waqtigiisii caadiga ahaa markii uu yimid meeshii uu fariisan jirayna oo ku taalla Bandra ayaa ilaaliyeyaashiisa iyana la fariisiyey kursigii waxay arkeen warqad yar waxaana furay Saliim Khan waxaana ku qornaa farriin
Salman Khan iyo Saleem khan iyo sallmana khan waxay noqon doonaan kuwo isku meel ku dambeeya ayuu Musa Saleem Khan u sheegay boliiska
Dhinaca kalena , booliiska Mumbai ayaa kormeeray halka uu deggan yahay Salmaan Khan iisagoo ka hadlayey telefishanka ayuu Salman Khan aabihii ku tilmaamay arrintaa mid aad u yar oo aan wax weyn aheyn .
Qoraal ka yimid qof aan la aqoon ayaa magac dhabay heesaaga Sadhu Musa Wala kaas oo la toogtay 29 kii May laguna dilay degaanka Mansa ee gobolka Punjab waxaana la sheegay in dilkiisa in ay fuliyeen kooxo dambiileyaal burcad ah oo hoggaamiyahooda uu ku jiro xabsiga Tihar ee Mgaalada Delhi kuna hanjabay in uu dilayo Salamn Khan sanadkii 2018 xilligaas oo uu saarnaa maxkamad ku taalla gobolka rajestan lalan xiriirinayo kiis ku saabsan ugaasi sharci darro
‘Waan la yaabanahay wixii aan sameeyay ee iskuulka la iiga eryay’Salman Khan ‘.
Salman Khan ayaa dhanka kale ka hadlay qaar ka mid ah marxaladihii uu soo maray markii uu iskuulka dhiganayay, isagoo sheegay in “la eryay” xilli uu ku jiray fasalka 4-aad ee dugsiga hoose.
“Run ahaantii ma aqaanno waxa khaldan ee aan sameeyay marka aan soo korayay, waana la yaabanahay sababtii la iiga eryay iskuulka anigoo fasalka afaraad ku jira. Waxaa la ii gudbiyay iskuul kale, markaas ka dibna waxay iskuulkeygii hore ka codsadeen inuu dib ii qaato”, ayuu yiri Khan.
Atoorahan ayaa intii uu sheekadaas waday wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday dhacdo dhex martay macallinka maamulaha ka ahaa mac-had uu dhiganayay. Wuxuu sheegay in maamulaha uu carooday markii uu SalmMaxkamad dambi ku heshay Salman Khanan u gambiyay cashirkii maaddada seyniska. “Bannaanka ayuu igu sugayay isagoo ul heysta, wuxuuna iisii istaagay albaabka weyn agtiisa! Wuu ogaa inaan wax kale ku mashquulsanaa”, ayuu yiri.
Xiddiga caanka ah ee aflaanta Hindida jila Salman Khan ayaa lagu helay dembi ah in uu ugaadhsaday nooc ka mid ah deerada oo aad u tiro yar xilli uu filim jilayey 1998dii.
Salman Khan ayaa dilay mid ka mid ah xayawaankan sida aadka ah loo ilaaliyo mar uu filim ku jilaayey Waqooyiga gobolka Rajasthan.
Salman Khan ayaa laga yaaba in uu wajaho xukun xabsi ah oo noqon kara hal ilaa lix sano, balse jilaagan ayaa haysta fursad ah in uu racfaan ka qaato xukunkan.
Ma ahan markii ugu horeysay ee Khan sharciga la horkeeno, isagoo 2002dii lagu eedeeyay in uu horay gaari mariyey nin hoy la’an ah oo meel bannaan jiifay iyadoo arrintaa la soo gabagabeeyey bishii disembark 2015kiixkamad dambi ku heshay Salman Khan.
Jilaaga Bollywood: Salman Khan maxaa loogu haystaa sawirka?
Jilaaga Bollywood ee u dhashay Hindiya, Salman Khan, ayaa weerar kala kulmay sawir uu dhigay bartiisa twitter-ka, isagoo jirkiisa mariyay dhiiqo.
Wuxuu sheegay in sawirkaas uu yahay “mid uu ku xushmeynayo dadka beeraleyda ah”.
Jilaagan ayaa meel beer ah oo ku taalla Mumbai isku soo xiray si uu dadka uga fagooda, taas oo sabab u ah cudurka corona.
Farriintiisa ah “xushmeynta beeraleyda” ayaa sababtay falcelin kala duwan, iyadoo dad badan ay ka caroodeen waxay ku sheegeen “isla weynin ka muuqda farriinta”.
Previous articleMid kamida Ganacsatada Somalida Cape Town Caan ka ka ahaa ayaa ladilay caawa
Next articleKulankii ugu horeeyay oo lagu aas-aasayay guddiga isku xirka Hay’adaha ka howlgala Bar
Maxey tahay kalmadda halista amni dhalin karta ee ku jirtay wareysigii...